Umfundi wonyaka wesibili ezifundweni ZezokweLapha, UMnu Mohamed Hoosen Suleman.
Umfundi Weziqu KwezokweLapha Uqokelwe Ekomitini Elihlelayo kwi-London World Health Organization
Umfundi wonyaka wesibili ezifundweni ZezokweLapha, uMnu Mohamed Hoosen Suleman, uqokelwe ukuba yi-Theme Officer yekomiti elihlelayo kwi-London World Health Organization (i-LonWHO) Simulation, umcimbi oba njalo ngesonto lokuqala kuLwezi (November) minyaka yonke.
Umbukiso i-WHO Simulations owethulwa e-London School of Hygiene and Tropical Medicine ngonyaka wama-2017, uhlose ukugqugquzela izinga lokwaziwa kwezinto ezithinta ezempilo emhlabeni, unike abafundi nongoti abasathuthuka ithuba lokuthuthukisa eyezempilo nezokubambisana.
Ikhono, ukuzinikela, nentshisekelo ka-Suleman ngocwaningo kuchaze i-UKWHO Central Committee, wase efakwa ekomitini elizohlela iNgqungquthela ye-LonWHO yakulo nyaka ekanye nabanye abafundi bezokwelapha nezempilo yomphakathi zase-United Kingdom nabakwamanye amazwe. Njenge-Theme Officer, uzokwenza ucwaningo ngezihloko zezempilo emhlabeni ngokohlelo lwe-World Health Assembly (WHA) lwangonyaka wezi-2020. Ziyodingidwa nabanye abasekomitini elihlelayo, bese kuba nomqulu wesihloko ozobhalelwa abazobamba iqhaza engqungqutheleni nezithunywa.
Umcimbi we-LonWHO ngowokungathekisa (simulation) kwezemfundo lapho ababamba iqhaza bengathekisa indlela yohlelo lwe-World Health Assembly (iWHA) yaminyaka yonke eba seKomkhulu le-WHO e-Geneva. I-WHA wuhlaka lwe-WHO oluthatha izinqumo.
USolwazi Peter Piot, umQondisi we-London School of Health and Tropical Medicine, uthe: ‘Ingqungquthela ye-LonWHO yithuba eliyingqayizivele lesizukulwane esisha ukuthi sizibuke ngeso lomunye umuntu, sibuyekeze indlela esicabanga ngayo bese kuthi okukhulu kakhulu sithuthukise amakhono okwakha ubudlelwano, ukwehlela ngezansi uma kunesidingo nokukhuthaza ukubambisana. Yiyona ndlela esikhula ngayo lena.’
‘Kuyinto enkulu ukusebenzisana nozakwethu baphesheya ukwenza isingathekiso se-WHA,' kusho u-Suleman. 'Sesinqumile ukuthi isihloko somcimbi wakulo nyaka sizothi Pandemics: Preparedness, Response and Recovery. Ngikubheke ngamehlo abomvu ukusebenzisana nethimba nokwakha ubudlelwano obuzohlomulisa wonke umuntu nabalingani abancane abanentshisekelo nabazinikele.’
Isifundiswa sezesiNtu Siqokwe njengoMhleli Omkhulu WeJeneli i-Teaching and Teacher Education
USosayensi WeJiyoloji Ukhethelwe eKomitini LeSayensi Elinohlonze
Oneziqu Kwezolimo Uhamba Phambili